प्रेमला - Saturdayकलम | Kavyalaya - काव्यालय
प्रेमला | SATURDAYकलम | Kavyalaya - काव्यालय
by दोस्ताज May 2, 2020
मलामीको छाप्रोबाट एक बट्टा खुकुरी चुरोट किनेँ बट्टाबाट एउटा चुरोट निकालेँ र आफैलाई जलाएँ । के हामी मान्छेपनि एउटा चुरोट नै होइनौँ र ? केहीले हामीलाई जलाउँछ र त हामी चुरोटलाई जलाउछौँ । अँ, अनि चुरोट जलाएर हिँड्दै रहेँ …..!
रोलिङ डान्स, जिब्रोलाई नचाउँदै, जिस्काउँदै हिँडिरहेको छु म यो अधबैसे बादललाई ।
झरी परी नै रहेछ
“एक्सक्युज मि, डु यु ह्याभ अ लाइटर ?” कुनै लेडिज भ्वाइस मेरा कानमा ठोक्किन्छ र म रोक्किन्छु….टक्क….! एक युवती, लगभग १८/१९ कि तरुनी, मेरै छेउमा आइपुग्छे..म उत्सुक आँखाले उसलाई हेरिरहेको छु । “डु यु ह्याभ अ लाइटर ?” ऊ फेरि त्यही प्रश्न दोहोर्याउँछे । “लिनोस्” – सल्कँदै गरेको चुरोट म उसलाई दिन्छु ।
ऊ मेरो जुठो चुरोटले सल्किन बाँकी उसको चोखो, सग्लो चुरोट सल्काउँछे । मैले पिइरहेको चुरोटको जुठो ठूटो मलाई नै फर्काउँछे । साच्चै चुरोट जुठो हुन्छ कि हुँदैन ? तर म मौन छु, सोध्दिनँ । बरु ऊ सोध्छे, “यस्तो झरीमा भिज्दै कहाँ जान लाग्नु भएको ?” म छोटो जवाफ दिन्छु, “९ किलो” । “लौ ! म पनि त नौ किलो नै जाँदै छु नि” ऊ आश्चर्य पोख्छे जो संयोग बनेर झरीसँगै मानौँ छ्याल-ब्यालिन पुग्छ । केहीबेर चुरोट तानेर लामो श्वास छोड्छे र फेरि बोल्छे, “हेर्नोस् न सवारी पर्खेको ३ घण्टा भन्दा बढी भइसक्यो, एउटा पनि आएन ।” म निशब्द छु, अझै मौन । मेरो चुरोट सकिन्छ । म हिँड्न थाल्छु ।
म हिँडिरहन्छु..ऊपनि मेरो छेउछाउ हुँदै अगाडि बढ्छे । अलि पर पुगेपछि ऊ फेरि बोल्छे, “अलि नजिक आउनोस् बिरामी पर्नु होला । यो छाता सानो भएपनि, दुई जनालाई मजैले धान्छ ।” ऊ छाताको तारिफ गरिरहेकी छे या मेरो दया ? “हैन ठिकै छ” छोटै जवाफ दिन्छु । तर पनि ऊ मेरै नजिक आइपुगेर मतिर बर्सिरहेका पानीका वेगलाई रोकेजस्तो गर्छे । उसको प्रयास खेर नजाओस् मान्छु या फेरि किन ? त्यसपछि मपनि उसको नजिकै पुर्याउँछु आफूलाई ।
हिँड्दाहिँड्दै, ऊ फेरि सोध्छे, “आज गाडी किन नचलेको ?” “नेपाल बन्द छ” म भन्छु । “लौ ! हो र ? किन नि ?” ऊ साच्चै बेखबर छे वा भएझैं गर्छे ? खैर, चुपचाप कारण बताइदिन्छु, “प्रमको बर्थ डे रे !” “प्रमको बर्थ डेमा पनि नेपाल बन्द ? यो त अत्ति भएन र ?” केटी विद्रोही रहिछे, म अनुमान लगाउँछु । एक फाँको हास्छु र म उसलाई जवाफ फर्काउँछु, “यतिबेला देश नेकपाको हातमा छ, यो कम्ती नै हो ।”
हिँड्ने क्रम छँदै छ । यसपटक कुन्नि के जोशले हो, म सुरु गर्छु,
“शुभनाम के पर्यो नि हजुरको ?”
“प्रेमला…तपाईंको के नि ?”
“मेरो मन्जिल… अनि घर कता नि तपाईंको ?”
“अनि, नौ किलो चाहिँ किन जान लाग्नु भएको ? कुनै काम ?”
“एउटा पोएट्रीको प्रोग्राम छ । त्यसकै लागि ।”
“ओहो, तपाईं पनि कविता लेख्नुहुन्छ ?”
“कविता त लेख्दिनँ, कहिलेकाहीँ मुक्तक लेख्छु ।”
“वाओ ! मुक्तक ? मलाई कस्तो मन पर्छ । एउटा सुनौँ न प्लिज !”
“हैन, ठिकै छ बाटोमा के मुक्तक भन्दै हिँड्नु !”
“जिन्दगी धेरै बाटोमै त बित्छ । यात्रामा जति मजा कहाँ हुन्छ र ? सुनाउनुस् न एउटा ।”
म नाइँ भनिरहन्छु, ऊ जिद्दी गरिरहन्छे । उसको जिद्दीको अघि केही जोर नचलेर एउटा सुनाउने निर्णय गर्छु । ऊ खुशी हुन्छे ।
सहिद होइन यो मन सजिलै गर्धन रेटिनलाई,
बाटो मुनिको फूल पनि होइन सजिलै टेकिनलाई,
सबैको एउटै प्रश्न अनि मेरो जवाफ पनि एउटै,
मेमोरी कार्ड हो र ? उसको याद सजिलै मेटिनलाई ?
ऊ हाँस्दै सोध्छे, “प्रेममा पर्नु भा’छ कि क्या हो ?” “हैन, यसै मनको भडास ।” मपनि हाँस्दै उत्तर दिन्छु ।
“तपाईं पनि मुक्तक लेख्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो नि मलाई ।” सोधुँ कि नसोधुँ हुँदै म सोध्छु । ऊ हाँस्छे मात्र ।
“किन हाँसेको ?”
“हजुर लजाएको देखेर ।”
“मुक्तक लेख्नुहुन्छ हो ?”
“हैन, कहिलेकाहीँ कविता कोर्छु ।”
“एउटा सुनौँ न त ।”
“हैन, ठिकै छ बाटोमा के कविता भन्दै हिँड्नु !” ऊ फेरि हाँस्छे ।
“जिन्दगी धेरै बाटोमै त बित्छ । यात्रामा जति मजा कहाँ हुन्छ र ? सुनाउनुस् न एउटा ।” म आफ्नो पैँचो तिर्छु ।
ऊ अचानक पोएट्रीको भाषामा बोल्न थाल्छे-
गोजीबाट लाइटर निकालेँ
पैतालाबाट बिस्तारै उसलाई जलाउन सुरु गरेँ
ताप दायाँ हातमा पुग्दै थियो
छिटोभन्दा छिटो कार्बन्डाइअक्साइड फ्याँकें, फू….फू..फू….
सुरु गरेँ शिरबाट जलाउन
पुनः पनि आगो
दायाँ हातमै पुगेछ
नजलेको तस्बिर नजलाइकन
प्याँकिदिएँ त्यहीँ कतै
हिँडेँ म त्यहाँबाट
यो संसारबाट पर…
बडो प्यारले उसले
‘प्रेमला’ नामको ट्याटु खोपेको थियो !
“प्रेममा पर्नु भा’छ कि क्या हो ?” म फेरिपनि उसैको भाषामा सोध्छु ।
“हैन, यसै मनका भडास ।” ऊपनि हाँस्दै मेरो भाषामा बोल्छे ।
हाम्रा भाषाहरु साटिन थालेपछि चुरोटपनि साटिन थाल्छ ।
बाटाभरि चुरोटहरु निभ्दै सल्किरहन्छन् । सल्किँदै, निभिरहन्छन् ।
हामी धुवाँ उडाउँदै, गफ लडाइरहन्छौँ ।
करिब दुई घण्टाको हिँडाइपश्चात हामी हाम्रो गन्तव्य अर्थात् ९ किलो पुग्छौँ ।
“मन्जिल जी, म यतैबाट छुट्टिनुपर्छ । आजको दिन म बहुत मिस गर्नेछु ।” ऊ बोल्छे । सुरुमा तर्किरहेको म, यतिबेला छुट्टिने कुराले खिन्न महसुस गर्छु ।
“यहाँसम्म त आइपुगिसक्यौँ । अब, एक कप चिया त पिएर छुटौँ ।”
“हैन मन्जिल जी, अर्को भेटमा पक्का । मलाई हतार छ । म जानैपर्छ । बरु फेसबुकमा फ्रेण्ड रिक्वेस्ट पठाउनुस्, त्यतै गफ गरौँला ।”
उसको रसिलो जवाफले पनि मेरो मनको अमिलो पखाल्न सकेन । शायद, मलाई खिन्न देखेर हुनसक्छ ऊ मलाई ढाडस दिन्छे,-
“हाम्रो भेटघाट भएकै छैन, भेटघाट हुन बाँकी नै छ नि । चिया पिउनेगरी फेरि भेटौँला नि मन्जिल जी । अहिलेलाई भने छुट्टिम् है त । ओके बाई…”
“प्रेमला जी, एउटा फोटो त लिम् न हौ, कति हतार ???” म चियाको भरपाई फोटोले गर्न खोज्छु । थोरै नजिक ऊ आउँछे, थोरै नजिक म जान्छु । खिचिक्क ! मेरो मोबाइलको क्यामरामा कैद हुन्छ उसको मुस्कान । त्यसपछि “गुडबाई” भन्दै ऊ आफ्नो बाटो लाग्छे । मैले भन्नै भ्याइनँ उसलाई कि मलाई “गुडबाई” भनेको मन पर्दैन । खैर, म हेरिरहन्छु ऊ गएको । ऊ हतारमा जस्तो देखिन्छे । हामी च्यात्तिन्छौ, दुई भागमा । उसको संसार बेग्लै र मेरो संसार बेग्लै भइसकेको छ ।
म एक चिया अड्डामा छिर्छु ।
“साहुनी एक कप चिया अनि एउटा खुकुरी चुरोट नि है !”
“खुकुरी त छैन बाबु ! पाइलट र सूर्य मात्र छ ।”
“उसो भए दुईवटा पाइलट ल्याइदिनोस् ।”
“अँ, साहुनी ! सुन्नोस् त, चियामा रङ अलि कडा है !”
“ए ! भै’हाल्छ नि बाबु ।”
म काउन्टर नजिकैको खाली टेबलमा गएर बस्छु । मेरा आँखा भर्खर खिचेको प्रेमलाको फोटोमै झुन्डिरहन्छन् । कहिलेकाहीँ दुई घण्टाको समयले पनि जीवनमा कति ठूलो अर्थ राख्दारहेछन् । मलाई यस्तो लाग्न थाल्छ, मैले मेरा आँखा उनकै रुपको मोहजालमा छाडेर आएको छु । साहुनी चिया लिएर आइसकिछिन् उनको बोलीले झस्किन्छु ।-“बाबु, यो केटी हजुरको को हो ?” म साहुनीलाई हेर्छु, उनको आँखा मेरै मोबाइलको स्कृनमा छन् ।
मोबाइल टेबलमा बिसाउँदै, पाइलट चुरोटमा सल्काउँदै, उही रोम्यान्टिक मुडमा बोल्छु म, “साहुनी, चाँडै ऊ हजुरको पसलमा आउने छे, मलाई चुरोट र चियाको लागि साथ दिन !” साहुनीको आँखाका उत्सुक्ता अब मलाई भयवित हुँदै एकतमासले घुर्न थाल्छन् । मैले केही गलत त बोलिनँ ? यिनकै छोरी-चेली परी कि क्या हो प्रेमला ? अनेक अड्काल काट्दै, केही नबुझेझैँ सोध्छु, “के भयो साहुनी ? आत्तिनु भयो त ? तपाईंले चिनेको केटी त होइन नि ?”
अति सुस्त गतिमा मेरो नजिक आएर साहुनीले मलाई बिस्तारै छुन्छिन् र भन्छिन्, “हजुर त मान्छे नै हुनुहुँदो रहेछ त ! यो फोटोकी केटी त्यही प्रेमला होइन ?” म छक्क पर्छु, यिनलाई कसरी थाहा भयो उसको नाम ? “के हो साहुनी, पुरै नालिबेली थाहा छ जस्तो छ त ! ग्राहकको राम्रो ख्याल राख्नुहुँदो रहेछ !
खुशी लाग्यो ।” यति भनेर म फेरि एक खिल्ली हाँसो र एक चिम्नी धुवाँ मुखबाट उडाउँछु, उसैलाई सम्झिँदै । “लौ, बाबुपनि ! पत्रिका हेर्नुहुन्न ? अस्ति भर्खर न्यायपुरमा सामुहिक बलात्कारपछि हत्या गरिएको भनेको, बिचरी यही केटी त हो नि !” साहुनीले स्वरलाई मसिनो, मसिनो गर्दै पुरै साउती मारेझैं बोलिन् । त्यसपछि मैले केहीपनि सुनिनँ । केहीपनि देखिनँ ।